निःशुल्क वेबसाइट छ भिडियो च्याट अनलाइन बिना दर्ता
एक मुक्त वेबसाइट गर्न अनुमति दिन्छ कि अनलाइन भिडियो कल को कुनै पनि प्रकारको बिना दर्ता. वेबसाइट मार्फत, तपाईं चाँडै सुरु एक भिडियो च्याट संग कुनै इन्टरनेट संग जोडिएको छ । लिंक. व्यक्ति तपाईं संग च्याट गर्न चाहनुहुन्छ, र यो क्षण उहाँले त्यो खुल्छ लिंक, तपाईं जान तयार छन्. यो वेबसाइट तपाईं दिन्छ एक-देखि-एक भिडियो च्याट संग कसैलाई. दुर्भाग्यवश, यो समर्थन गर्दैन समूह भिडियो च्याट. यो वेबसाइट अनुमति दिन्छ, पूर्ण स्क्रीन भिडियो चैट । छ लागि अन्य व्यक्ति लिंक मा क्लिक गर्नुहोस् र कुराकानी सुरु.
जब तपाईं खुला वेबसाइट, तपाईं एक पृष्ठ माथि एक जस्तै छ । यो हो यस पेज मा तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ लिंक छ जो प्रतिलिपि र साझा व्यक्ति संग तपाईं गर्न चाहन्छु भिडियो च्याट. एक पटक साझा, तपाईं सम्म प्रतीक्षा गर्न व्यक्ति जसलाई तपाईं प्रदान लिंक मा क्लिक यो । जब यो अन्य व्यक्ति क्लिक साझा लिंक, वेबसाइट होमपेज प्रतिस्थापन गरिनेछ द्वारा एक भिडियो च्याट पर्दा छ । सुरुमा, यो सोध्नुहुन्छ पहुँच गर्न अनुमति आफ्नो माईक र. दिन अनुमति, र सुरु एक भिडियो च्याट आफ्नो मित्र संग. तपाईं अन्त गर्न सक्छन् च्याट मा क्लिक गरेर ‘अन्त बटन’ मा स्क्रिनको तल गरेर वा सरल ट्याब बन्द युक्त भिडियो कल । वेबसाइट पनि प्रदान एक विस्तार लागि क्रोम ब्राउजर गर्न अनुमति दिन्छ जो एक भिडियो कल बिनै खोल्ने वेबसाइट छ । यो स्थापित गर्न सकिन्छ मा क्लिक गरेर ‘क्रोम वेब स्टोर’ मा को अन्त होमपेज छ । एक पल्ट स्थापित तपाईं देख्न सक्छन्, एक भिडियो च्याट गर्न अर्को चिह्न क्रोम ठेगाना पल्ट मा । बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र लिंक हुनेछ स्वतः प्रतिलिपि गर्न आफ्नो गर्छ । पेस्ट र पठाउन यो लिंक कसैलाई तपाईं चाहनुहुन्छ संग भिडियो च्याट. एक साथ एक नयाँ ब्राउजर पनि माथि खोल्न एक जस्तै.
यो छ जहाँ एक भिडियो च्याट सुरु हुनेछ. वेब-आधारित आवेदन थिएन ठीक मा फायरफक्स लागि मलाई । यो गर्न मलाई सोधे अपडेट मेरो ब्राउजर प्रयोग गर्न तापनि, यो मेरो फायरफक्स ब्राउजर मिति सम्म छ. अनुमति दिन्छ मात्र भिडियो च्याट कुनै पाठ च्याट गर्न सकिन्छ. एक समय मा मात्र दुई व्यक्ति भिडियो च्याट. सबै प्रकार को च्याट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अन्य जस्तै वेबसाइटहरु गरेको वा तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै वेबसाइट जस्तै देखा । मा अनुमति जो एक समय मा मान्छे छ भिडियो कन्फ्रेंसिंग. एक सुन्दर वेबसाइट सेटअप एक भिडियो च्याट. कुरा यो बनाउँछ जो विभिन्न देखि अन्य अनलाइन भिडियो च्याट वेबसाइटहरु छ कि यो आवश्यकता कुनै दर्ता छ । क्रोम विस्तार एक नयाँ सुविधा संग बस एक क्लिक र तपाईं सुरु गर्न तयार एक भिडियो च्याट
← देशहरुमा पूरा गर्न फ्रान्सेली पुरुष र महिला को लागि देख प्रेम भविष्यमा
अनलाइन डेटिङ बिना दर्ता →